Maninona DASQUA？ - Dasqua
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 1980, Dasqua dia nanao fitaovana fandrefesana marina amin'ny alàlan'ny OEM ho an'ny marika malaza eto amin'izao tontolo izao. Ny vokatray voalohany dia misy calipers, micrometers, tondro sns ... Manaraka ireo dian-tongotra maharitra ireo dia mifantoka amin'ny famokarana ireo vokatra marika misy azy manaraka ny fenitra sy ny rafitra voafehy tsara sy tsara tantana indrindra i Dasqua. Izahay izao dia mbola mitazona ny fomba fanao nentin-drazana izay ampiarahina amin'ireo milina manara-penitra avy amin'ny STUDER, HAAS ho an'ny fizotran'ny famolavolana milina ary manatsara ny vokatra amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana farany sy fampiharana ny fomba fanabeazana.
SISTEM QC TRACEABLE
Ny fitaovana fandrefesana Dasqua rehetra dia voasedra hahazoana fankatoavana avy amin'ny Labs CNAS manam-pahaizana iraisam-pirenena, izay misy rafitra sy fitaovana fanaraha-maso avy amin'ny ZEISS, HAIMER, ary MARPOS. Ny mari-pankasitrahana mifehy miaraka amin'ny vokatra dia azo zahana amin'ny fenitra DIN sy ANSI. Ny fanaraha-maso an-tsary henjana dia ampiharina hialana amin'ny gorodona kely na dia amin'ny faritra tsy refesina aza.
Fanaterana haingana kokoa avy amin'ny STOCK (EUROPE, AMERIKA, ASIA)
Napetrakay ny tanjon'ny tahan'ny fahatanterahana 90% （ankehitriny 75%) amin'ny fizarana ataonay amin'ny faran'ny taona 2021, manarona 800+ habe / famaritana ampiasaina indrindra amin'ny tahiry mba hamenoana ny takian'ny mpanjifa isan'andro.
FAMPANDROSOANA SY FANOMPOANA
Warranty dia famantarana ny fahatokisan'ny mpanamboatra ny vokatra nomeny. Ny fitaovana fandrefesana Dasqua REHETRA dia azo antoka mandritra ny ROA taona amin'ny fahamendrehana sy ny fahaiza-miasa. Izahay dia manome ny kojakoja rehetra sy ny taranja fiofanana ho an'ireo masoivohom-pirenena sy mpaninjara manerantany. Ny mpanjifa farany rehetra dia afaka mahita fanohanana ara-teknika avy amin'ny mpaninjara eo an-toerana na an-tserasera (www.dasquatools.com).